Halyeeygii AS Roma Ee Totti Muxuu Ka Yiri In Kooxdiisii Hore Ay Ku Aado Wareega 8 UCL Kooxda Barca %
Francesco Totti, ciyaaryahankii hore ee kooxda kubada cagta AS Roma, ee wadanka Talyaaniga ayaa wuxuu si kooban uu uga hadlay isku aadka wareega Sideed dhamaadka Champions League, gaara ahaan in kooxdiisii hore ay ku aado dhigeeda Barcelona.
Totti, ayaa wuxuu qiray inuu ku farax-san yahay inay ku aadaan Barca, laakiin wuxuu ku nuux-nuuxsaday inuu yahay kulanka mid aad u adag, islamarkaana naadihisa ay ku adag tahay inay si dhib yar ay kusoo dhaafaan camaaliqada La Liga.
“Waxaan ku farax-sanahay inaan ku aado Barcelona – Inaad gaarno final-ka waa mid aad u adag – Waan udagaalami doonaa, waxaana isku adi doonaa inaan garaacno kooxaha sida Barcelona si aanu gaarno final-ka,” ayuu yiri Totti.
“Waan isku deyi doonaa inaan sidaas aan sameyno – Hadii aan ku aadi lahayn Real Madrid iyo Manchester City ayaa ahaan lahayd mid aad uga culus,” ayuu hadalkiisa kusii daray laacibkii hore ee qaranka kubada cagta Talyaaniga.
Mar wax laga weydiiyay ciyaaryahanka lamberka 10-aad uqaata Barcelona ee Lionel Messi ayaa wuxuu ku jawaabay Totti: “Cunugeyga waa uu jecel yahay isaga – Maalin walba wuxuu istusaa aniga muuqaal uu kasoo qado Youtube-k uu isaga ku saabsan.
Sikastaba, ciyaaryahan Francesco Totti ayaa wuxuu kamid ahaa wafdigii ka socday kooxda wadanka Talyaaniga ka dhisan ee AS Roma kuwaasoo uga qeybgalay isku aadka wareega Sideed dhamaadka Champions League oo ka dhacay maanta Magaalada Nyon.
Barcelona vs AS RomaChampions LeagueFrancesco Totti